REPUBLIQUE MALGACHE 14 octobre 1958 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tranga sarotra vonoina amin’ny tantaram-pirenena malagasy ny fananganana ny République Malgache tao amin’ny Lycée Galliéni, ny talata faha 14 oktobra 1958. Ny Zaikan’ ny Antenimieran’ny Provansy no nantsoina hanapaka ny ho satan’ny TOM Madagascar eo anivon’ny Firaisambe Frantsay na Communauté Française. 208 nanaiky ny République Malgache Etat de la Communauté ( art.76 Cion 1958) ; 0 nanda ; 26 nanaiky ny République fa nitsipaka ny Communauté ary 6 tsy tonga. Ny alarobia faha 15 oktobra no nanambaran’ny Haut Commissaire Général, André Soucadaux, ny fankatoavana ny République Malgache sy fanekena azy ho Fanjakana na Etat ao anatin’ny Communauté. Nambarany ary fa lany andro tsy manan-kery ny lalàna nanjanaka an’i Madagasikara . Izay no nitranga ary nasaina nitotorebika ny Malagasy. Tranga lehibe ho an’ny Firenena Malagasy.
Nisy hatsikana nasehon’ny Gazety HEHY taty aoriana. Noraran’ny Fanjakana ny hamoahana ilay gazety fa tena marina mampieritreritra ny mpamaky. Valan-jaza no sary ilazana ny Communauté ; zaza milalao korintsan-jaza sy mitomany. Dadabe, dia manambitamby ilay zaza mitomany manao hoe « Aza mitomany ka hendre tsara ! Anaka, akorintsano ny kilalao efa nomeko anao ». Raha an-kamantatra ilay hatsikana, ny valiny dia tsotra : ny Filoha Philibert Tsiranana ilay zaza ; ny République Malgache no korintsan-jaza lalaoviny. ny Général de Gaulle no Dadabe ary ny Communauté no fefin’ny vala. Sangisangy zaritenany, izay voa mangina ! hoy ny fitenin’ankizy.
Zava-niseho ny tantara : teto Madagasikara ny Gal de Gaulle naka ny fon’ny Malagasy hankatoa ilay drafi-dalàmpanorenana hifehy ny Repoblika fahadimy. Tetsy Mahamasina, ny 22 aogositra 1958, nangataka ny fanafoanana ny lalàna 6 aogositra 1896 nanjanaka an’i Madagasikara ho zanatany frantsay, ny Président Tsiranana. Hoby sy horakoraka no akon’izany teo amin’ny vahoaka.
Namaly ny Filohan’ny Fitondram-Panjakana Frantsay : « En disant oui à ce qui vous sera demandé …. Vous serez de nouveau un Etat comme vous l’étiez quand le Palais de vos Rois était habité », sady notondroiny i Manjakamiadana. Nilaza koa izy « Votre île n’est pas contrainte…le choix lui sera donné…ou bien de séparer son sort de celui de la France… ».
Ny valin’ny fitsapana hevi-bahoaka tamin’ny 28 septambra 1958 dia 1.361.801 ny ENY ary 391.166 ny TSIA. Sahiran-tsaina ny maro tsy niezinezina ny fandresen’ny ENY : Madagasikara no nanaraka an’i Guinée tamin’ny hamaroan’ny TSIA izay nahazo ny antsasa-manila teto amin’ny provansin’Antananarivo.
Teraka ny fisalasalana tao an-tsain’ny maro, ka tsy niraika firy ny Malagasy nahazo République. Tsangan-kevitra efa-toko no hamisavisana ny fialam-bala nisy.
Voalohany amin’ny famisavisana dia mikasika ny teny sy ny voambolana nampiasaina. Toa tsy noraharahaina firy io. Tsy takatry ny maro fa ny voambolana dia sady fanaposahana hevitra no mifaka amin’ny tantara sy kolom-piainana ary fisainana nipoirany. Tamin’ny 1958, teny frantsay sy voambolana frantsay no nentina nandamina ny fitondrana ny raharaham-panjakana teto Madagasikara.
Ny tantarantsika no nanazavan’ ny mpianatra malagasy sasany ny nifidianana ny République Malgache fa tsy ny hoe Fanjakana Malagasy. Tamin’ny 1947, dia nenjehan’ny mpanjanaka ny tsangan-kevitra Fanjakana Malagasy ; niniany nampifangaroana ny Fanjakana Malagasy tamin’ny Fanjakana entin’Andriamanjaka. Nanaitra ihany ny fihetsiky ny fitondrana mpanjanaka nisalotra ny anarana hoe Fanjakana teo anoloan’ny vahoaka, rehefa mba nanana sombim-pahefana.
Tamin’ny 1958, dia ny fahalalana ny fototry ny haifitondrana na théorie générale du droit no hahazoana ny resaka.
Nandrava ny Fanjakana Malagasy ny Jly Galliéni ka ny fanetrena an’i Ranavalona ho Mpanjakan’Imerina fa tsy Mpanjakan’i Madagasikara no tanjona. Nitovy lasitra tamin’ireo Mpanjaka nanoa ny Fanjakana malagasy. Ny fiandrianana dia natao takon-kenatra fa nolavina sy nopotehin’i Galliéni ny fiekena fa ny Mpanjakan’i Madagasikara no fanehoana ny fiombonana ao amin’ny fanoavana ny fiandrianan’ny Firenena. Manameloka ilay safidy noraisin’ny Mpanjanaka izany ny famelomana ny hoe Fanjakana, foto-kevitra manana ny hasiny ho an’ny Malagasy.
Fanjakana vaovao fa tsy famerenana hasina ny Fanjakana malagasy no safidin’ny Communauté. Tsy fandravana ( abrogation) ny nanjanahana an’i Madagasikara no setrin’ny République fa fanambarana fa lany andro tsy manan-kery intsony (caducité) ilay lalàna tamin’ny 6 aogostra 1896. Tsy kitihina izany ny vitan’ny Mpanjanaka fa mbola velona !
Ny kolontsaina nitaizana sy niahiana ny Malagasy koa manazava ny fampisafotofotoana. Ny politikan’ny teny napetrak’i Galliéni dia ny fanovana ny Malagasy ho Frantsay « vazaha mainty ». Tsy ny hahafehy tsara ny teny frantsay fotsiny fa hisaina amin’io teny io no tanjona. Malagasy maro no nahay teny anglisy ka ny nanandratana avo tao an-tsain’ny Malagasy ny hasin’ny kolontsaina, sy tantara ary asan’i Frantsa no hahatomombana ilay politikany. Izany dia notoriana fa ny filamatry ny République française sy ny fampielezana fa mahafaoka an’izao rehetra izao sy izao tontolo izao ny maha frantsay no lafatra.
Tamin’ny1958, mbola nanjaka mafy sy tamim-pahatsorana ny fisainana mifantoka amin’ny fanovozan-kevitra ary fankatoavana tsotra na firehana, na hay samihafa sy fomba amam-panao frantsay. Ny lalàm-pitondrana (droit public) sy ny haifitondrana ary ny tantara dia tsy nifaka tamin’ny fanagasiana. Ny fitondran’ny République no nasoasoana ary nasongadina ny fanenjehana ny Fanjakan’ny Andriamanjaka, ny fanamarinana ny fanjanahana an’i Madagasikara no ventin’ny tantara. Nanamora ny nanasinana ny République izany rehetra izany.
Ny hevitra faharoa azo anazavana ny tsy firaika tamin’izany dia ny fifangaroana mikasika ny dikan’ny fandresen’ny ENY. Niezaka ny hizaka ny fahefana hametra ny lalàm-pitondrana azy ny République Malgache. Maro ireo lalàna na hitsivolana fehizoro sy fototra nandaminana ny Tany sy ny Fanjakana. Ho an’ny mpandini-dalàna anefa, tsy piliavava ny famehezana ny hai-lalàna. Ilaina manokana ny fahatakarana ny foto-pisainana nanaika ny safidy raiketina ho fitsipika. Fadiana ny hitsin-dalana sy ny fakana tahaka : fahelemena mantsy ny mitomany ny randrana manendrika ny hafa. Tamin’ny 1958 ambonin’ny fanjakazakan’ny kolontsaina dia marolafy ny fepetra noraiketina tamin’ny fanorenana frantsay. Nihevitra ny maro fa fankatoavana ny savaranonando sy ny fehizoron’ny haifotokevitra ifakan’ny lalàm-pitondran’ny Communauté française ny ENY. Fisintonan-kevitra tamin’ny tranga sy traikefa frantsay no lasa lasitra tamin’izany ary mandrak’ankehitriny aza. Ny tranga sy traikefa malagasy izany dia nampandeferina rehefa namakafaka, fa nentina hanamarinan-tena mba nisehoana eo anoloan’ny iraisam-pirenena.
Ny fanazavana tsotra dia miainga eo amin’ny ny famakafakana ny rafitra nankatoa ny fananganana ny République Malgache. Lafiny fahatelo tsy dia nampiraika. Iza no nifidy ny République Malgache ? Rehefa nofoanana ny Fanjakana Malagasy dia tsy nisy rafitra nahefa niraisan’ny Nosy sy nisolotena ny Malagasy. Nirehareha ny Haut Commissaire, de Coppet, fa tanteraka ny Provansy dimy mifanentana amin’ny safidin’ny Fitondrana frantsay ho setrin’ny Fanjakana Malagasy , iombonan’ny Nosy manontolo sy notakian’ny M.D.R.M.. Ny Provansy no kitro nifaharan’ny fitondrana ; namaivanina mihitsy ny fiheverana ny Nosy manontolo. Takon-kenatra ny Assemblée Représentative : tsy satry ny nanangana azy io. Tsy nisy antenimiera hankato ny hetra hiditra ho an’ny kitapombolan’i Madagasikara ; nefa ny provansy nanana ny azy. Amin’ny rafi-bolana an’i Frantsa sy Etazonia « représentant » no mahefa amin’ny tany sy ny firenena. Norarana ny Assemblée Représentative tsy hitsabaka ny raharaha politika. Niniana tsy ny rafitra mahenika ny Tany manontolo no nantsoina fa ny Zaikan’ny Antenimieran’ny Provansy. Eo am-pandinihana dia gaga satria ny 22 aogositra 1958, ny Assemblée Représentative no nikabarian’i de Gaulle talohan’ny vahoaka. Nolazaina fa ny fisoloan-tenan’ny mpikambana amin’ny Antenimieran’ny Provansy dia mifaka kokoa amin’ny safidy mivantan’ny vahoaka.
Ny safidy fehizoro izany dia ny nifadiana ny hanapahana ny fifandrohizan’ny rafitra talohan’ny 1958 sy ny rafitra vaovao ajoro. Ireo Mpanolotsaina nampisalorana ny Fahefana hisafidy ny ho Sata vaovao dia ireo lany tamin’ny andron’ny loi-cadre ary maro an’isa ny kandidam-panjakana. Nanjaka anefa ny fifampiahiana. Nilaza ny mpizaika iray fa raha latsa-bato miafina dia tsy fantatra izay mety hivoaka : départementalisation, fahaleovantena, asa ! Fa ny marimarina dia voalazan’ilay mpampianatra nivaky fa « tsy afaka hahatoky ny Malagasy sy ny mpifidy mpamadika ny Fanjakana Frantsay. » Fatahorana ny safidim-bahoaka no nandraisana izany. Izany no fisainana nolovaina tamin’ny toe-tsain’ny voanjo rehefa nisedra ny fanoherana sy ny faharetan’ny tompon-tany teo anoloan’ny baiko midina ; tsy nekeny ny fifanatrehana politika ka notamorainy sy notebahany ny Malagasy.
Tsapa fa nahataka-davitra ny Malagasy ka tsy laitran’ny vahiny sasany. Ny didin’ny fitsarana tamin’ny V.V.S. dia nanantitra fa ny fanasoasoana sy fanandratana ny maha malagasy ho afaka hampandroso ny Malagasy no heloka zakain’ireo voampanga izay ninia tsy nankasitraka ny soa nentin’i Frantsa teto. Nahatsiaro voafitaka na voapepopepo ny maro ka natsatsotsatso ny fihetsiky ny olona raha nampitahaina tamin’ny fankalazana ny 14 jolay na nolazaina fa tsy hanam-paharoa ny nananganana ny République Malgache.
Fahefatra ny Fahaleovantenam-pirenena no nanahirana tamin’ny 1958, nandrava ny fifampitokisana. Ny Fahaleovantenam-pirenena no taky nilokalokan’ny Tia Tanindrazana ary maro anefa ireo izay natahotra ny fahaleovantena. Ny ezaky ny Mpitondra nanazava ny maha marim-pototra ny République Malgache dia nanakorontana ny saina. Ao amin’ny lalàm-panorenana frantsay dia tsy misy toerana ho an’ny Tany mitsipaka azy. Ny fahaleovantena dia famaizana ireo manda ny Communauté. Ny maha mpikambana amin’ny Commonwealth, anefa, dia tombony. Nanontany tena ny maro mikasika ny fetran’io fepetra io.
Nanatrika ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana taona 1959 ny Filoha Tsiranana sy Houphouet Boigny kanefa diso fanantenana. Naka toerana teo anivon’ny solontena frantsay ary notondroin’ny takelaka France. Ny Filohan’i Guinée, Sekou Touré, nanana ny toerany manokana fa Firenena nahaleotena. Efa nankatoavina ho Firenena mahaleotena ny Fanjakana Malagasy : masina an-taniny ary nankatoavin’ny Firenena vahiny hafa. Tamin’ny 1958-59, sahirana ny Fanjakana Frantsay teo amin’ny Firenena Mikambana fa nandrorona ny raharahan’i Algérie, nilaina ny vaton’ ireo zanatany 12. Tsy zoto na laina ho an’i Frantsa ny nanome ny fahaleovantena ary « Je suis partisan de l’indépendance de Madagascar, aurait dit le Général Gaulle au Président Tsiranana….demande[..]z le transfert des compétences de la Communauté… » .
Tamin’ny 1960, raha ny ara-bakiteny no rasaina, famindrana ho an’ny République Malgache ny fahefana niombonana niantsorohan’ny Communauté no niseho. Rehefa noraisin’i Madagasikara ireo fahefana ireo dia nankatoavan’ny Firenena eran-tany fa Mahaleotena ny République Malgache ka noraisina tao amin’ny Firenena Mikambana. Ny ampitson’ny nanatanterahana ny famindram-pahefana, dia nosoniavina ny fifanekana fiaraha-miasa nanankinan’ny Fanjakana malagasy andraikitra maro amin’i Frantsa (fiorenan’ny Frantsay eto Madagasikara, ny politikan’ny paika aman-kay teti-piarovana, ny faribola franc, ny fampianarana ambony…) Tamin’ny 1973, ny fifanarahana vaovao no niarahan’ny roa tonta nandrava ny fifanarahana tamin’ny 1960 ka afaka nizaka tanteraka ny hasin’ny Fahaleovantena i Madagsikara. Ny Fitondran’ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa no nanandratra ny 26 jona ho fankalazana ny fetim-pirenena. Ny 26 jona 1960 vao neken’ny Firenena rehetra ho tena Fanjakana sy Firenena tokoa i Madagasikara ; ny République Malgache dia fanjakana nankatoavan’i Frantsa tao anatin’ny Communauté française.
Rehefa fehezana izany, matoan-kevitra efatra no tiana havohitra. Voalohany, lanja miakatra ny fiainana politika ka ny mangarahara sy ny marina na ara-tsaina na ara-drafitra no manafaka amin’ny fitapitaka fanaon’ny mpanao politika : tsy maharitra izay sadasada.
Faharoa sarotra ny mitsaratsara ny safidy politika, tsy maro ireo afaka manaka-davitra sy mahadinika lalina. Ny tantaran’ny République Malgache dia maneho mivantana ny rohim-pifamalivalian’ny Lalàm-pitondrana (droit public) sy ny politika. Vokatry ny fifandanjan’ny hery politika ny fitsipi-dalàna: izay mahery no manoritra ny fitsipi-dalao. Rehefa tsy mifanentana intsony amin’ny fifampitondran’ny hery politika ny refy napetraka dia tsy zaka intsony. Raha tsy mahatakatra izany ka tsy manitsy ny paikany ny fitondrana dia mikatso ny fiainana politika. Raha tsy mifanentana amin’ny ventin’olana ny setrin’ny fitondrana dia mihitsoka ao anatin’ny fota-mandrevo ny fiainam-pirenena. Ny fahaiza-mandinika lalina, mamakafaka sy manazava ny anjara andraikitry ny rehetra sy ny tsirairay no anjaran’ny mpandinika ny haifitondrana sy fiaramonina. Ny tsapa, indrisy, eo amin’ny tantarantsika dia fanebahana no mahamaika sy ny fahakingana manondronondro ho mpanakorontana ny sasany mba hanilihana ny tsy fahombiazan’ny safidy politika marivo tototra.
Ary farany, aoka hahatsiaro fa ny helok’ireo VVS dia mifono hevitra lalim-paka. Dimy taona talohan’ny Fihaonana iraisam-pirenena voalohany hanoherana ny imperialisma (1921 Bakou) no nahavitan’ny V.V.S. ny heloka nanenjehana azy ireo. Ny tantara dia manamarina ny tokony hanongilanana ny sofina amin’ny tsangan-kevitra manivaka amin’ny marimaritra mahazatra.
 Nakana hevitra ny fampianarana Doctorat de Droit public : 1967-68 MODERNE Franck : la décolonisation de l’Afrique orientale ; 1974 RANJEVA Raymond : la décolonisation en droit de Madagascar. Fampianarana tsy voatonta printy ; Livre d’Or de l’Indépendance de Madagascar. Imprimerie Nationale Tananarive .1961.